Haweenay dishay gabar saddex sano jir ah Booliska Degmada Jowhar gacanta ku soo dhigeen – STAR FM SOMALIA
Ciidamada ammaanka Magaalada Jowhar, gaar ahaan kuwa Saldhiga Booliska ayaa gacanta ku soo dhigay haweenay dishay gabar yar oo saddex sano jir aheyd, taasi oo ay u aheyd eedo.
Gabadha yar ee la dilay ayaa lagu magacaabaa Aamino Maxamed Xuseen, haweenayda wax dishayna waxaa lagu magacaabaa Dowlo Cumar, dilka gabadhan ayaa loo adeegsaday in lagu tuuray Killi Biyo oo ku yaallo Magaalada Jowhar.
Haweenayda wax dishay ayaa gabadha yar ee saddex sano jirka ah waxa ay u aheyd eedo, oo waxaa qabay gabadha yar Aabaheed, iyadoo amuurta dilka ay ka dambeysay muran dhanka Qoyska ah oo ka dhex taagnaa Aabaha dhalay Gabadha la dilay Maxamed Xuseen iyo Haweenayda uu qabo ee Dowlo Cumar.
Guddoomiyaha Xaafada Kulmis ee Magaalada Jowhar Yaxye Xasan Sheekh ayaa u sheegay Warbaahinta gabadha yar ee la dilay in lagu tuuray kiliga oo meydkeeda, halkaasi laga soo saaray.
Taliye ku xigeenka Saldhiga Booliska Magaalada Jowhar Geelle Isaaq Warsame, ayaa dhankiisa Saxaafadda u sheegay inay gacanta ku hayaan Dowlo Cumar oo ah haweenayda dishay gabadha yar ee saddex sano jirka ah, isaga oo sheegay qoraalo ay ka qoreyn haweenayda inay ku cadeysay inuu jiro muran dhanka qoyska ah oo iyada iyo saygeeda ka dhex taagnaa.
Waxaa socda Baaritaan dheeri ah oo ku aadan dilka gabadhaasi yar loo geystay, iyadoo dhaqaatiirta Isbitaalka Magaalada Jowhar ay cadeeyeen in gabadha lagu tuuray Kiliga, balse aysan ku dhicin.